Biby goavam-be efatra | Martech Zone
Alahady, Jona 10, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Sarimihetsika mahaleo tena mahavariana ity ary angamba ny hoavin'ny fizarana horonantsary. Lasibatra kokoa ho an'ny olona toa ny zanako lahy io, fa mbola nankafiziko ihany. Ny tantara dia mampiseho tsara ny tsy fahamendrehana rehetra miditra amin'ny fifandraisana. Somary mitebiteby kely indraindray, nefa heveriko fa tena misy (ary antitra aho). Ireo hafatra ao ambadiky ny sarimihetsika dia ara-potoana sy manan-kery ho an'ny zatovo, mahita ny tenany sy ny tsirairay amin'ny fiainany tanora.
Ny talen'ny ankehitriny dia tohanan'ny Spout - ny olona rehetra misoratra anarana dia hanome $ 1 i Spout hanampy amin'ny fandoavana ny sarimihetsika. Ary koa, ny tranonkala manana magazay ahafahanao misintona ny sarimihetsika, manafatra dvd, mahazo lobaka sns.
Tranofiara ho an'ny biby goavam-be efatra
Ny sarimihetsika iray manontolo dia misy mandritra ny 1 herinandro amin'ny Youtube. Sarimihetsika mahafinaritra izany - zahao. Tiako ny mahita sarimihetsika toy izao manome vola ampy ho an'ireo mpitantana hanohy ny asany. Moa ve izany tsy fomba iray mahomby amin'ny marketing sy fizarana sarimihetsika? Tsy mino aho fa hahita horonantsary manana ny maha-marina sy maha-zava-misy ireo Four Eyed Monsters amin'ny orinasan-tserasera famokarana mahazatra ianao.
Tags: biby goavam-be efatraYouTube
Mampiasa Fanentanana hanarahana ny lazan'ny sokajy ao amin'ny WordPress sy Google Analytics